ညီလင်းသစ်: Goodbye 2009, Welcome 2010!
Posted by ညီလင်းသစ် au 30.12.09
Happy New Year! 2009 ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ။ ပို့စ်နာမည်လေး သိပ်မိုက်တယ်။ ကျွန်မက ၂၀၁၀ ကို ကြိုဆိုတဲ့ ပို့စ်က မနက်ဖြန်မှ တင်မှာမုိ့ ၂၀၀၉ ကို နှုတ်ဆက်တဲ့ ပို့စ်ပဲ တင်လိုက်တာ ဖြစ်တေယ်။ နှစ်စ်မှာ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှ ပြီးပြည့်စုံပါစေ။
နှစ်သစ်တွေအားလုံးရဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ အကိုညီလင်းသစ်ရေ :)